“ဆန္ဒမဲပေးချင်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ရယက မှလက်မခံ” ကျွန်တော်က မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ရတနာဘုမ္မိအရှေ့ရပ်ကွက် အကွက်(၅၄၁) မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ရန် လိုသေးသော်လည်း ရယက မှ ရတယ်ဟုဆိုပြီး မပေးမနေရ အိမ်တိုင်ရာရောက် နာမည်စာရင်း လာရောက်ကောက်ခံသွားပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက် ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ဆန္နဖြင့် ဆန္နမဲပေးချင်သော်လည်း ရယက မှ လုံးဝလက်မခံကြောင်း ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောဆိုလေသည်။ ကျွန်တော်တို့နာမည်စာရင်း ပါမပါ သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ နာမည်မပါသဖြင့် မဲထည့်ချင်ကြောင်း၊ နာမည်စာရင်းပေးချင်ကြောင်း ပြောဆိုသောအခါ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က မရဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်၊ စာရင်းပိတ်သွားပြီလို့လည်းပြောတယ်။ ၁၈.၃.၂၀၁၂ ညနေ ၄နာရီ တုန်းကဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြောသံတွေကိုကြားနေရတယ် ကျွန်တော်တို့ သွားပြောတဲ့နေ့က တစ်ကယ်တမ်း စာရင်းမပိတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို သ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ဒီနေ့ဘဲ ပြန်သွားပြောပြန်တယ် ကျွန်တော်လည်းမနက်ဖြန်မဲဆန္နပေးချင်တာနဲ့ သွားပြောတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က ကျွန်တော့်ကို အော်ငေါက်ပြီး “မင်းတို့ဘာလို့ အခုမှ လာပြောတာလဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၂ က စာရင်းပိတ်သွားပြီ မရဘူး၊ မင်းတို့ တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားပြောကြည့်” လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က “အဲဒီလိုရလား တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားထည့်လို့ရလား?” လို့မေးတော့၊ “ဒါတော့မသိဘူုးလေ” ပြောပြီး ဟိုရပ်ကွက်လွှဲ ဒီရပ်ကွက်လွှဲနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးတော့ ဥက္ကဌကို တစ်ခွန်းဘဲမေးဖြစ်ခဲ့တယ် “ဟို ၁၈ရက်နေ့က ကျွန်တော်လာပြီး စာရင်းပေးတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ “မရတော့ဘူး စာရင်းပိတ်ပြီပြောပြီး ဘာလို့လဲ အခု ဥက္ကဌ ပြောတော့ ၂၄.၃.၂၀၁၂ နေ့က စာရင်းပိတ်တယ်” လို့ပြောရတာလဲ လို့မေးတော့ ဥက္ကဌ က “လာမပြောနဲ့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး???????” ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဆန္နမဲ ပေးချင်ပါသော်လည်း ဒီလို ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရယက ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်းလိုမျိုး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့လိုမျိုး လူမျိုးတွေရှိနေသရွှေ့ မဲဆန္နကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ သန့်ရှင်းတဲ့မဲ ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိူးတွေ နောက်ထပ်ရှိနေအုံးမယ် ဆိုရင်တော့ နောင်လာမယ့် ရွှေးကောက်ပွဲတွေ အတွက်တော့ အလားအလာကောင်းတွေ၊ စစ်မှန်တဲ့ မဲဆန္နတွေ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြချင်ပါတယ်……………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ဆန္ဒမဲပေးချင်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ရယက မှလက်မခံ” ကျွန်တော်က မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ရတနာဘုမ္မိအရှေ့ရပ်ကွက် အကွက်(၅၄၁) မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ရန် လိုသေးသော်လည်း ရယက မှ ရတယ်ဟုဆိုပြီး မပေးမနေရ အိမ်တိုင်ရာရောက် နာမည်စာရင်း လာရောက်ကောက်ခံသွားပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက် ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ဆန္နဖြင့် ဆန္နမဲပေးချင်သော်လည်း ရယက မှ လုံးဝလက်မခံကြောင်း ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောဆိုလေသည်။ ကျွန်တော်တို့နာမည်စာရင်း ပါမပါ သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ နာမည်မပါသဖြင့် မဲထည့်ချင်ကြောင်း၊ နာမည်စာရင်းပေးချင်ကြောင်း ပြောဆိုသောအခါ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က မရဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်၊ စာရင်းပိတ်သွားပြီလို့လည်းပြောတယ်။ ၁၈.၃.၂၀၁၂ ညနေ ၄နာရီ တုန်းကဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြောသံတွေကိုကြားနေရတယ် ကျွန်တော်တို့ သွားပြောတဲ့နေ့က တစ်ကယ်တမ်း စာရင်းမပိတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို သ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ဒီနေ့ဘဲ ပြန်သွားပြောပြန်တယ် ကျွန်တော်လည်းမနက်ဖြန်မဲဆန္နပေးချင်တာနဲ့ သွားပြောတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က ကျွန်တော့်ကို အော်ငေါက်ပြီး “မင်းတို့ဘာလို့ အခုမှ လာပြောတာလဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၂ က စာရင်းပိတ်သွားပြီ မရဘူး၊ မင်းတို့ တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားပြောကြည့်” လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က “အဲဒီလိုရလား တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားထည့်လို့ရလား?” လို့မေးတော့၊ “ဒါတော့မသိဘူုးလေ” ပြောပြီး ဟိုရပ်ကွက်လွှဲ ဒီရပ်ကွက်လွှဲနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးတော့ ဥက္ကဌကို တစ်ခွန်းဘဲမေးဖြစ်ခဲ့တယ် “ဟို ၁၈ရက်နေ့က ကျွန်တော်လာပြီး စာရင်းပေးတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ “မရတော့ဘူး စာရင်းပိတ်ပြီပြောပြီး ဘာလို့လဲ အခု ဥက္ကဌ ပြောတော့ ၂၄.၃.၂၀၁၂ နေ့က စာရင်းပိတ်တယ်” လို့ပြောရတာလဲ လို့မေးတော့ ဥက္ကဌ က “လာမပြောနဲ့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး???????” ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဆန္နမဲ ပေးချင်ပါသော်လည်း ဒီလို ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရယက ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်းလိုမျိုး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့လိုမျိုး လူမျိုးတွေရှိနေသရွှေ့ မဲဆန္နကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ သန့်ရှင်းတဲ့မဲ ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိူးတွေ နောက်ထပ်ရှိနေအုံးမယ် ဆိုရင်တော့ နောင်လာမယ့် ရွှေးကောက်ပွဲတွေ အတွက်တော့ အလားအလာကောင်းတွေ၊ စစ်မှန်တဲ့ မဲဆန္နတွေ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြချင်ပါတယ်………………..
“ဆန္ဒမဲပေးချင်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ ရယက မှလက်မခံ” ကျွန်တော်က မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် ရတနာဘုမ္မိအရှေ့ရပ်ကွက် အကွက်(၅၄၁) မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွှေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျွန်တော်တို့အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ရန် လိုသေးသော်လည်း ရယက မှ ရတယ်ဟုဆိုပြီး မပေးမနေရ အိမ်တိုင်ရာရောက် နာမည်စာရင်း လာရောက်ကောက်ခံသွားပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက် ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ဆန္နဖြင့် ဆန္နမဲပေးချင်သော်လည်း ရယက မှ လုံးဝလက်မခံကြောင်း ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောဆိုလေသည်။ ကျွန်တော်တို့နာမည်စာရင်း ပါမပါ သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ နာမည်မပါသဖြင့် မဲထည့်ချင်ကြောင်း၊ နာမည်စာရင်းပေးချင်ကြောင်း ပြောဆိုသောအခါ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က မရဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တယ်၊ စာရင်းပိတ်သွားပြီလို့လည်းပြောတယ်။ ၁၈.၃.၂၀၁၂ ညနေ ၄နာရီ တုန်းကဖြစ်တယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ ပြောသံတွေကိုကြားနေရတယ် ကျွန်တော်တို့ သွားပြောတဲ့နေ့က တစ်ကယ်တမ်း စာရင်းမပိတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို သ်လာခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ဒီနေ့ဘဲ ပြန်သွားပြောပြန်တယ် ကျွန်တော်လည်းမနက်ဖြန်မဲဆန္နပေးချင်တာနဲ့ သွားပြောတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့က ကျွန်တော့်ကို အော်ငေါက်ပြီး “မင်းတို့ဘာလို့ အခုမှ လာပြောတာလဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၂ က စာရင်းပိတ်သွားပြီ မရဘူး၊ မင်းတို့ တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားပြောကြည့်” လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က “အဲဒီလိုရလား တစ်ခြားရပ်ကွက်မှာ သွားထည့်လို့ရလား?” လို့မေးတော့၊ “ဒါတော့မသိဘူုးလေ” ပြောပြီး ဟိုရပ်ကွက်လွှဲ ဒီရပ်ကွက်လွှဲနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နောက်ဆုံးတော့ ဥက္ကဌကို တစ်ခွန်းဘဲမေးဖြစ်ခဲ့တယ် “ဟို ၁၈ရက်နေ့က ကျွန်တော်လာပြီး စာရင်းပေးတော့ ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အကွက် (၅၄၁) ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ “မရတော့ဘူး စာရင်းပိတ်ပြီပြောပြီး ဘာလို့လဲ အခု ဥက္ကဌ ပြောတော့ ၂၄.၃.၂၀၁၂ နေ့က စာရင်းပိတ်တယ်” လို့ပြောရတာလဲ လို့မေးတော့ ဥက္ကဌ က “လာမပြောနဲ့ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး???????” ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ဆန္နမဲ ပေးချင်ပါသော်လည်း ဒီလို ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရယက ဥက္ကဌ ဦးစိန်ဝင်းလိုမျိုး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း ဦးမြသောင်း တို့လိုမျိုး လူမျိုးတွေရှိနေသရွှေ့ မဲဆန္နကြီးဟာ ဘယ်တော့မှ သန့်ရှင်းတဲ့မဲ ဆိုတာကြီး ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိူးတွေ နောက်ထပ်ရှိနေအုံးမယ် ဆိုရင်တော့ နောင်လာမယ့် ရွှေးကောက်ပွဲတွေ အတွက်တော့ အလားအလာကောင်းတွေ၊ စစ်မှန်တဲ့ မဲဆန္နတွေ ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြချင်ပါတယ်………………..
Posted by boxboy92 on Mar 31, 2012 in Copy/Paste |0comments
View all posts by boxboy92 →